Karnalikhabar » यी १२ चलचित्रमा कलाकारहरुले साँच्चैको सेक्स गरेका थिए यी १२ चलचित्रमा कलाकारहरुले साँच्चैको सेक्स गरेका थिए – Karnalikhabar
प्रकाशित मिति :2017-08-09 17:11:47
१२. गाण्डु – निकै विवादित बनेको यो भारतीय चलचित्र कलाकारहरुले साँचैको सेक्स गरेको चलचित्रहरुको सूचीमा परेको छ । एक जना संगीत प्रेमी युवा गाण्डुको कथामा बनाइएको यो चलचित्रमा पनि कलाकारहरुले साँच्चैको सेक्स गरेको देखाइएको छ । यो भारतमा प्रतिबन्धित चलचित्र हो ।
Viral: प्राईभेट पार्टीमा लुकेर रोमान्स गर्दैथिए रणवीर–दीपिका
जब अमिताभलाई उछिने चिरन्जीवीले !
सलमान, शाहरुख र आमिरलाई पछि पार्दै प्रभास पहिलो स्थानमा (भिडियो रिपोर्ट)